Wararka - Sida loo doorto dharka hudheelka
Gogosha hudheelka, taas oo ah, linenka, si isa soo taraysa u noqotay baahi maalinle ah oo lama huraan u ah safarada ganacsiga nolosha dadka. Iyada oo la hagaajinayo heerka nolosha dadka iyo isbeddelka fikradda isticmaalka, gogosha hudheelku waxay ku sii badanaysaa raadinta quruxda dabiiciga ah, oo muujinaysa shakhsi ahaaneed, oo u baahan wax qabad iyo qadarin labadaba. Sababtoo ah gogosha hudheelka ee isticmaalka tooska ah ee maqaarka aadanaha, sidaa darteed, tayada wax soo saarkooda, kuma xirna oo keliya tayada hurdo ee dadka, waxayna xitaa saameyn ku leedahay caafimaadka iyo badbaadada jirka aadanaha.
Gogosha hudheelka (taasi waa linen) waxa loola jeedaa adeegsiga alaabada dadku ugu nastaan ​​oo ku seexdaan, doorkeeda ugu weyni waa dahaarka qabowga, qurxinta, qurxinta iyo ka hortaga, iwm. Caadi ahaan la isticmaalo badanaa waxaa lagu saleeyaa alaabada dharka sida alaabta ceeriin ee gogosha , sida gogosha, daboolka sariirta, salka gogosha, gogosha sariirta, fidinta sariirta, koofiyada sariirta, tuwaalka barkin, barkin (oo ay ku jiraan barkin barkin, udgoon barkin), barkinta, daboolka barkinta, buste, tuwaal tuwaal, shabaqa kaneecada, iwm. taxane cad, taxane daabacaad, taxane daabacan, taxane jacquard ah iyo taxane dun-yare ah qaabkeeda dhar iyo midabkeedaba. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo loo eegayo nooca buuxiyo, gogosha sidoo kale waxaa loo qaybin karaa gogosha dabiiciga ah ee laga buuxiyo fiberka (sida gogosha, dhogorta, xariir, iwm.), Fiber kiimiko ah gogosha laga buuxiyo iyo gogosha hudheelka ee buuxsamay.
Laba, dooro oo adeegso talooyinka
2. Tabaha iibsiga
Si loo iibsado gogol hudheel caafimaad leh, ammaan ah oo raaxo leh, waxaa lagula talinayaa in macaamiisha ay ka doortaan dhinacyada soo socda:
(1) Aqoonsiga sumadda
Aqoonsiga summaddu waa mid ka mid ah tixraacyada muhiimka u ah macaamiisha inay iibsadaan gogosha hudheelka. Macaamiisha wax iibsiga alaabtu waxay marka hore eegi karaan aqoonsiga astaanta si ay u aqoonsadaan faa'iidooyinka iyo qasaaraha ka soo baxa badeecada, waxyaabaha caanka ah ee sumcadda wax soo saarka shirkaddu caanka ku tahay oo dhammaystiran. Haddii sheygu uusan lahayn astaan ​​astaan ​​ah, ama waxyaabaha ku jira astaanta astaantu aysan dhammaystirnayn, aan caadi ahayn, aan sax ahayn, ama laga yaabee, waa lagama maarmaan in si taxaddar leh loo iibsado. Sida shirkad saf ah safka hore ee Shiinaha, Jiangsu Dabaysha Dabiiciga ah waxay iibisay wax soo saarkooda gudaha iyo dibaddaba 20 sano oo dabayl iyo roob ah ka dib. Waqtigan xaadirka ah, waxay noqotay sumcad wanaagsan oo ay ku kalsoon yihiin hudheelka hudheelku. Mustaqbalka, dabaysha dabiiciga ah waxay sii wadi doontaa inay diirada saarto dhismaha calaamadaha waxayna sii wadi doontaa inay horay ugu socoto wadada abuuritaanka sumado caan ah gudaha iyo dibaddaba.
Markaad dooranaysid alaabada gogosha hudheelka, waa in si taxaddar leh loo hubiyaa, in dusha sare ee maradu ay siman yihiin oo isku mid yihiin, qaab wanaagsan; Hadday daabacaaddu caddahay oo dhalaalayso; Hadduu khadka tolliyuhu toosan yahay, inuu tolkiisu siman yahay; Dhammaan noocyada qalabka, maaddooyinka, sida jiinyeerku waa siman yahay, badhanku waa siman yahay, haddii buuxintu tahay mid jilicsan oo isku mid ah iyada oo aan wasakh ahayn, iwm Xulitaanka midabada, waxaa habboon in la doorto midabyo khafiif ah, si maadadda formaldehyde, midabka soonka, dheehda amine ee udugga kansarka ee kansarku ka sarreeyo khatarta caadiga ah way ka yaraan doontaa, haddii aad u baahato inaad doorato gogol hudheel mugdi ah, waxaad u isticmaali kartaa maro yar oo daabacan ama dheeh dusha ah marmar dhawr jeer ah, haddii midabku muuqdo, waxay muujinaysaa midab ku xirnaanta sheyga ayaa liita. Dharka linenka ah ee ay soosaartay dabaysha dabiiciga ah ee Jiangsu waxay isticmaashaa waxyaabo maqaarka u roon, iyada oo lagu gaarayo eber fluorescence iyo eber formaldehyde, taas oo kaliya muujisa midabka dabiiciga ah ee linenka. 318 yarns ayaa la isku dhajiyay si caadi ah oo wanaagsan, oo keenaya taabashada satinka. Iyada oo habka cufnaanta-cufnaanta sare leh, dusha sare ee dharka ayaa ka sii jilicsan, korantada joogtada ahna waa la diidaa, si loo gaaro nolol hurdo raaxo leh.
Macaamilku waa marka uu doorto oo wax iibsado, uu urin karo, haddii uu leeyahay ur ur ah, ay leeyihiin walxaha kiimikada ah sida 'formaldehyde' oo ay u badan tahay inuu ku sii nagaado, ma fiicneyn inuu iibsado. Gaar ahaan iibsashada ka-hortagga yareynta, lidka-duudduubka, jilicsanaanta, fidsan iyo alaabada kale ee dhammaystirka si gaar ah looga taxaddarro.
Intaa waxaa sii dheer, tayada wax soo saarka shirkadaha caanka ah ee caanka ah iyo xarumaha ganacsiga ee caadiga ah waa la damaanad qaaday, sidaa darteed, waxaa loo soo jeediyay in macaamiisha ay ka iibsadaan goobaha ganacsiga caadiga ah ama dukaamada gaarka ah ee shirkadaha caanka ah ee caanka ah. Ka dib iibsashada ama habka isticmaalka, haddii uu jiro wax shaki ah oo ku saabsan tayada wax soo saarka, waxaad la tashan kartaa waaxda kormeerka tayada wax soo saarka, ururka macaamiisha ama waaxaha kale ee la xiriira. Soosaarka dabaysha Jiangsu dabiiciga ah ee alaabta sariirta linenka ah oo leh qalab jilicsan, ha ku darin wax sunta ah iyo kiimikooyinka waxyeellada leh, ka hor intaadan ka tagin warshadda dhammaan kormeerka heerka qaran, kuu keena khibrad raaxo leh.
tuwaalka wajiga, daboolka dharka, Tuwaalo midab leh, Shukumaan cudbi ah, tuwaalka qubeyska la dhigo, tuwaalka qubeyska,